Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseHaiti » Isebe laseMelika libongoza abantu baseMelika ukuba bayishiye iHaiti ngoku
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseHaiti • Amalungelo abantu • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Novemba 12, 2021
Isebe laseMelika libongoza abantu baseMelika ukuba bayishiye iHaiti ngoku.
Bonke abemi baseMerika kufuneka baqwalasele ngokucophelela iingozi zokuhamba okanye ukuhlala eHaiti ngokubhekiselele kwimeko yokhuseleko lwangoku kunye nemingeni yeziseko zophuhliso, iSebe lase-US lilumkisa.
Isilumkiso seSebe leSizwe laseMelika siza phakathi kwengxaki yezopolitiko eyandayo kwilizwe elinengxaki yeCaribbean.
Ngokutsho kwe-MSF, isibhedlele sayo kunye negumbi likaxakeka liya kuphelelwa yipetroli yeejeneretha kwiiveki ezintathu okanye ngaphantsi.
I-Ambassy yase-US ayinakwenzeka ukuba ikwazi ukunceda abemi base-US eHaiti ngokuhamba ukuba ukhetho lwezorhwebo alukho.
The IYunayithedi Steyitsi walumkisa abemi baseMelika kwi Haiti ukuba "ukunqongophala kwepetroli okuxhaphakileyo kunokunciphisa iinkonzo eziyimfuneko kwimeko kaxakeka, kubandakanya ukufikelela kwiibhanki, ukuhanjiswa kwemali, unyango olungxamisekileyo, i-intanethi kunye nonxibelelwano, kunye neendlela zokuhamba zikawonke-wonke kunye nezabucala," sibongoza bonke abantu baseMelika ukuba balishiye ilizwe elikhathazekileyo leCaribbean ngokukhawuleza. .
Bonke abemi baseMelika “kufuneka baqwalasele ngononophelo imingcipheko yokuhamba okanye ukuhlala Haiti ngokujonga imeko yangoku yokhuseleko kunye nemingeni yeziseko ezingundoqo”, the KwiSebe leSebe laseUnited States kuchazwe kwingxelo.
"I-Ambassy yase-US ayinakwenzeka ukuba ikwazi ukunceda abemi base-US eHaiti xa behamba ukuba ukhetho lwezorhwebo alukho."
Akukacaci ukuba bangaphi abemi baseMelika ngoku abahlala kulo Haiti, kodwa isilumkiso esinqabileyo esivela kwiSebe likaRhulumente siza phakathi kweengxaki zezopolitiko ezinzulu kunye nokunqongophala okukhulu kwepetroli okuye kwachaphazela izibhedlele, izikolo kunye namashishini, njengoko urhulumente waseHaiti kunye namapolisa bezama ukulawula imigulukudu eye yavala iiterminals zokuhambisa amafutha kwiiveki ezininzi.
Ngokutsho kooGqirha Ngaphandle kwemida (Medecins Sans Frontiers, okanye i-MSF), isibhedlele sayo kunye neziko likaxakeka liya kuphelelwa ngamafutha ejenereyitha kwiiveki ezintathu okanye ngaphantsi ukuba izinto ezintsha azifiki.
Ukunqongophala kwepetroli kuye kwabeka emngciphekweni umthamo wamanzi waseHaiti, oxhomekeke kwiijeneyitha.
Le meko ikwakhokelele ekunyukeni kwamaxabiso okutya kwilizwe elinabantu abangaphezu kwezigidi ezili-11 apho abantu abangaphezu kwama-60 ekhulwini benza ngaphantsi kweedola ezimbini ngosuku.
The KwiSebe leSebe laseUnited States Isilumkiso siza njengeqela labavangeli basemazweni abali-17 abathinjwa kwinyanga ephelileyo, kuquka nabemi abali-16 base-US, basavalelwe.